Shift key ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Shift key ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ
Eder Ferreno | 16/11/2021 12:52 | လည်ပတ်မှုစနစ်များ
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာ၏ကီးဘုတ်ကို desktop သို့မဟုတ် laptop ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ QWERTY ကီးဘုတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အထူးသော့များစွာရှိသည်။ အထူး သို့မဟုတ် ကွဲပြားသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆနိုင်သော ဤသော့များထဲမှ တစ်ခု shift key ပါ။. ၎င်းသည် သန်းနှင့်ချီသောလူများနေ့စဉ် ၎င်းတို့၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်သော့တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည်ဘာကိုအသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် ဘာအတွက်အသုံးပြုသည်ကို လူအများမသိကြပေ။
နောက်ဆို အားလုံးပြောပြမယ်။ ကီးဘုတ်ပေါ်က shift key အကြောင်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှ ဤသော့အကြောင်း၊ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့် PC တွင် မည်သည့်အရာအတွက် အသုံးပြုရနိုင်သည်ကို သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ဤအချက်အလက်အားလုံးကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသော့အကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ၎င်းသည် သင့်အား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
1 Shift key ဆိုတာဘာလဲ
3 ဒီသော့က ဘာအတွက်လဲ။
4 Shift သော့တွဲများ
Shift key ဆိုတာဘာလဲ
Shift key ကို shift key လို့လည်း ခေါ်တယ်၊ ကွန်ပြူတာများပေါ်တွင် modifier key တစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤကီးကို ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် အပေါ်သို့မြှားသင်္ကေတဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ အခြားသော့တစ်ခုနှင့် တွဲနှိပ်လိုက်သောအခါတွင် အထူးသော့များဖြစ်သည့် မွမ်းမံပြင်ဆင်သောကီးများ အမျိုးအစားအတွင်း ကျရောက်သော သော့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသော့၏အမည်သည် လက်နှိပ်စက်ဟောင်းမှ မူလအစရှိသည်။. လက်နှိပ်စက်များတွင် ကီးအချို့ပါသော အက္ခရာ သို့မဟုတ် သင်္ကေတကို ရေးလိုပါက သို့မဟုတ် ထိုအချိန်က စာလုံးကြီးဖြင့် နှိပ်ထားသည့် စာကို ရေးလိုပါက ထိုသော့ကို ဖိထားရပါမည်။ Shift ဟူသော စကားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်လို အပြောင်းအလဲကိုလည်း ဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည် စာရိုက်နေစဉ်တွင် ကလစ်နှိပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတိအကျဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ် ကွန်ပျူတာများသည် ယခင်က လက်နှိပ်စက်များကဲ့သို့ပင်၊ ဤအမျိုးအစား၏သော့နှစ်ခုရှိသည်။. သင့်တွင် မည်သည့်ကီးဘုတ်အမျိုးအစားရှိပါစေ ကီးဘုတ်တစ်ဖက်စီတွင် shift key တစ်ခုရှိသည်။ သာမန်ကီးဘုတ်၊ ကျစ်လစ်သော၊ TKL အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အဆိုပါကီးဘုတ်ကို မည်သည့်ဘာသာစကားကိုမျှ မခွဲခြားဘဲ (PC ကိုရောင်းချခဲ့သည့်နိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍)။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ဤအမျိုးအစား၏ သော့နှစ်ခုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
shift keys များသည် သော့၏ ဒုတိယတန်း၏ အစနှင့် အဆုံးတွင် တည်ရှိသည်။ကီးဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်စတင်လျှင်။ ပထမတစ်ခုသည် ကီးဘုတ်၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင် Caps Lock သော့အောက်တွင်ရှိသည်။ ညာဘက်တွင် ၎င်းသည် Enter သော့နှင့် အက္ခရာ Ç ၏ အောက်တွင်ရှိသည်။ ကီးဘုတ်၏ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသော Shift သော့၏အထက်တွင် မြို့တော်သော့သော့ကို တွေ့ရပါမည်။ ညာဘက်ရှိ တစ်လုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ကီးဘုတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ ၎င်းသည် ကီးဘုတ်အပြည့်အစုံ၊ လက်ပ်တော့တစ်လုံး သို့မဟုတ် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော) ဖြစ်သောကြောင့် ညာဘက်တွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည့်တည်နေရာတစ်ခု ရှိနိုင်ပါသည်။
ကိစ္စရပ်တွေမှာ ပါသင့်တယ်။ ကျစ်လစ်သောကီးဘုတ် သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့တစ်လုံးညာဘက် Shift ကီးသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မြှားခလုတ်များအထက်တွင်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင် သင့်တွင် ကီးဘုတ်အပြည့်အစုံရှိလျှင် ထိုကီးကို ညာဘက် Control ကီးအထက်တွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ၎င်း၏တည်နေရာကို ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသည့်အရာသည် သင့်တွင်ရှိသောကီးဘုတ်အမျိုးအစားကိုမခွဲခြားဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်တည်နေရာတွင် အမြဲရှိနေမည့် ဘယ်ခလုတ်ဖြစ်သည်။
သော့နှစ်ခုလုံးကို တူညီသော အပေါ်သို့မြှားသင်္ကေတဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းရှိ Shift ခလုတ်ကို လျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်စေရန် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ အဆိုပါအိုင်ကွန်ကို ရှာရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ၎င်းတွင်ရှိသောဘာသာစကားကို အရေးမကြီးပါ၊ ဤကီးကိုကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ထိုတူညီသောအိုင်ကွန်ကို အချိန်တိုင်းအသုံးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာရှိ shift key ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ စာ၏ စာလုံးအကြီးကို ရေးနိုင်သည်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိထားတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤကီးနှင့် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ စာလုံးများကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ စခရင်ပေါ်တွင် ထိုစာလုံးကို စာလုံးအကြီးဖြင့် ပြသမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းသည် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ မည်သည့်စာလုံးများနှင့်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စမှာ ပြဿနာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင် ကီးဘုတ်၏ဘယ်ဘက်ရှိ shift key အထက်တွင်ရှိသော caps lock ကိုဖွင့်ထားပါက၊ ထို့နောက် သော့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမူသည်။ ယခင်တစ်ခုဆီသို့။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ shift key ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် နှိပ်နေစဉ်တွင် စာလုံးတစ်လုံးကို နှိပ်ပါက၊ ၎င်းကို စခရင်ပေါ်တွင် စာလုံးအသေးဖြင့် ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကာဗာလော့ခ်ကို ဖွင့်ထားသရွေ့။
ဒီရွေးစရာအပြင် ဤအပြောင်းအရွှေ့သော့သည်လည်း ရည်ရွယ်ချက်များ ပိုများသည်။. ဂဏန်းများအထက်တွင်ရှိသော အက္ခရာ သို့မဟုတ် အက္ခရာဖြင့်ရေးပြီးသားသော့များအထက်တွင်ရှိသော အက္ခရာကို ရေးသားရာတွင်လည်း အသုံးပြုမည့်သော့ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ နံပါတ်4ကို နှိပ်ပါက၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဒေါ်လာသင်္ကေတ ($) ပေါ်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။5သို့မဟုတ်6ကဲ့သို့သော အခြားသော့များကို နှိပ်ပါက ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သင်္ကေတများကို ပြသမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် caps lock ကိုဖွင့်ထားသော်လည်း၊ ဤခလုတ်များထဲမှ တစ်ခုကို နှိပ်ပါက၊ အမြဲတမ်းနှင့် shift ကို တစ်ချိန်တည်းနှိပ်သည့်အခါတွင် သင်္ကေတများကို ထပ်မံပြသပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာရှိ shift key ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ ၎င်းသည် အထက်ဖော်ပြပါအရာများအပြင် အသုံးဝင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော သော့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ အဲဒါက ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ သော့တစ်ခုပဲ။ ဖြတ်လမ်းလင့်ခ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် အကြိမ်များစွာတွင် အသုံးပြုပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် ကီးဘုတ်။ ဤဖြတ်လမ်းလင့်ခ်များကို ၎င်းရှိအခြားသော့များဖြင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သည်။ ကီးဘုတ်ကိုနေ့စဥ်အသုံးပြုသောအခါတွင် အလွန်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် တင်ဆက်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် shift key ပေါင်းစပ်မှုများကို ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးမည့် ပရိုဂရမ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဖြတ်လမ်းလင့်ခ်များကို ပိုမိုရိုးရှင်းကာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပိုမိုသင့်လျော်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ပျူတာရှိ ဤသော့ကို ပိုမိုရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် shift key ၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက် function keys ကိုမွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါသည်။. ယနေ့ထွက်ရှိထားသော ကီးဘုတ်များတွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကီးများ F12 အထိသာရှိသောကြောင့် Shift + F1 ကိုနှိပ်ပါက၊ F13 စသည်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ အပိုလုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်များမရှိခြင်းအား အချိန်တိုင်းတွင် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီကီးကို သုံးပါတယ်။ စာသားပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိုင်များစွာကို ရွေးချယ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ Shift ခလုတ်ကို နှိပ်ရင်း ဖိုင်တစ်ခုကို ကလစ်လိုက်ရင် အခြားသူတွေကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဥပမာ၊ အလယ်အလတ်အားလုံးကို ရွေးရန် အောက်ဘက်တွင် ဖိုင်တစ်ခုကို + shift နှိပ်ရန်ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ စာသားတည်းဖြတ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် + shift ကိုနှိပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်၊ သို့မှသာ ကာဆာမှ ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်သည့်နေရာသို့ စာသားအားလုံးကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
အရင်အပိုင်းမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဤသော့သည် အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဖြတ်လမ်းများ သို့မဟုတ် အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ အချို့သော ပေါင်းစပ်မှုများကို သင်မသိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်ကိစ္စတွင် သေချာပေါက် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏ shift key ပါ၀င်သော ယနေ့အသုံးပြုနိုင်သည့် ပေါင်းစပ်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
[Win] + [Shift] + [↑] ဝင်းဒိုး၏ အကျယ်ကို မပြောင်းလဲဘဲ စခရင်၏ အမြင့်သို့ ချဲ့ထွင်ပါ။
[Win] + [Shift] + [↓] လက်ရှိဝင်းဒိုးကို အလုပ်ဘားပေါ်ရှိ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် လျှော့ချသည်။
[Win] + [Shift] + [→] စခရင်ပေါ်ရှိ ဝင်းဒိုးတစ်ခုအား ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်အနားသတ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အနေအထားကို မပြောင်းလဲဘဲ ဘယ်မှညာသို့ ရွှေ့ပါ။
[Win] + [Shift] + [←] အနေအထား သို့မဟုတ် အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ စခရင်ပေါ်ရှိ ဝင်းဒိုးတစ်ခုကို ညာမှဘယ်သို့ ရွှေ့ပါ။
[Win] + [Shift] + [S] စခရင်ရိုက်ကူးပါ
[Ctrl] + [Shift] + [Esc] Task Manager ကို Windows တွင်ဖွင့်သည်။
[Shift] + Start menu သို့မဟုတ် Taskbar မှ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။ ယခုအချိန်တွင် သင်ဖွင့်ထားသော ပရိုဂရမ်၏ အခြားဥပမာတစ်ခုကို ဖွင့်ပါ။
[Ctrl] + [Shift] + Start menu သို့မဟုတ် taskbar မှ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။ လက်ရှိဖွင့်ထားသော ပရိုဂရမ်ကို စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါ။
[Shift] + [F10] ရွေးချယ်ထားသည့်အရာဝတ္ထု၏ ဆက်စပ်မီနူးကို ဖွင့်သည်။
[Shift] + [Insert] ကလစ်ဘုတ်မှကူးထည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Shift key ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ
Fortnite VR၊ Virtual Reality ဗားရှင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ရောက်ရှိလာမည်နည်း။
Netflix VR ကို ဘယ်လိုသုံးရသလဲ၊ ဘာကိုတွေ့မလဲ။